“ဆယ်စုနှစ်ကြာအောင် လှပနေတဲ့ သူမရဲ့ အလှတွေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို ချပြလာတဲ့ အေးမြတ်သူ” - Cele Connections
ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးချော အေးမြတ်သူကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ အနုပညာလောကမှာ မော်ဒယ်ဘဝနဲ့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး သူမရဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းတွေကို ပရိသတ်တွေ နှစ်ခြိုက်အားပေးမှုတွေ ရရှိအောင် အမြဲကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်..။ လက်ရှိမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိပြီး အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပိုင်ရှင် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်လို့ နေပါပြီ..။ အေးမြတ်သူက အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပေမယ့် အနေတည်ကာ အေးဆေးပြီး အများအတွက်ဆို ပရဟိတအလုပ်တွေကို ထိပ်ဆုံးကနေ ပါဝင်ကူညီတတ်တဲ့သူပါ..။
ပရိသတ်တွေနဲ့ အမြဲထိတွေ့ ပြောဆိုပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ အေးမြတ်သူက ဧပြီလ (၂၅)ရက်နေ့မှာတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာမှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အရာတွေနဲ့ မပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေတဲ့ အရာလေးတွေကို “ကိုယ်ကအစွဲအလန်းကြီးသူပါချစ်သူ… ဘယ်အရာတွေကမှ ကိုယ့်ကို မပြောင်းလဲစေနိုင်ဘူး….။ ကိုယ့်အပြုံး….. ကိုယ့်အမူအယာ…ကိုယ့်ဟန်ပန် နဲ့ ကိုယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ အရာတွေ က ခုချိန်ထိ အရင်အတိုင်းပါ…. ။ အချိန်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း…… ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲသွားတဲ့… ကျွန်မအပြုံး… ကျွန်မအသွင်သဏ္ဌန်../ ကျွန်မဟန်ပန်../ ကျွန်မတန်ဖိုးထားတဲ့အရာ…./ အချစ်အပေါ်တန်ဖိုးထားမှု့ ….. တွေအတွက် ကျွန်မကို ကျွန်မကျးဇူးတင်နေခဲ့တယ်…။ မင်း သိပ်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေး က ခုချိန်ထိ အချစ် ကို တန်ဖိုးထားတက်ဆဲ အမျိုးသမီးတယောက် အဖြစ် အရင်အတိုင်း ပြောင်းလဲ စွာ သူမ နေရာမှာ သူမ တည်ရှိနေတယ် ချစ်သူ.။
ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု ကျော်ကျော်မှာ ကိုယ့်အချစ်က မပြောင်းလဲဘူး…. ။ ကိုယ့်ချစ်သူသာ …. ပြောင်းလဲသွားတာပါ.။” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။ အေးမြတ်သူကတော့ သူမချစ်တဲ့သူသာ ပြောင်းလဲသွားပေမယ့် သူမရဲ့ အပြုံးနဲ့ ဟန်ပန်တွေကတော့ အရင်အတိုင်း ဆက်လက်ပြီး တည်ရှိကာ လှပနေဆဲပဲလို့ ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးရော မပြောင်းလဲတဲ့ အလှတွေနဲ့ ပိုလှလှလာတဲ့ အေးမြတ်သူလေးကို အားပေးရင် မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်..။
“ဆယျစုနှဈကွာအောငျ လှပနတေဲ့ သူမရဲ့ အလှတှနေဲ့ ပွောငျးလဲသှားတဲ့ အရာလေးတဈခုကို ခပြွလာတဲ့ အေးမွတျသူ”
ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီးခြော အေးမွတျသူကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ အနုပညာလောကမှာ မျောဒယျဘဝနဲ့ စတငျဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး သူမရဲ့ အနုပညာအရညျအခငျြးတှကေို ပရိသတျတှေ နှဈခွိုကျအားပေးမှုတှေ ရရှိအောငျ အမွဲကွိုးပမျးလုပျဆောငျနတေဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ..။ လကျရှိမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြနဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိပွီး အကယျဒမီထူးခြှနျဆုပိုငျရှငျ မငျးသမီးတဈလကျဖွဈလို့ နပေါပွီ..။ အေးမွတျသူက အောငျမွငျတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျဖွဈပမေယျ့ အနတေညျကာ အေးဆေးပွီး အမြားအတှကျဆို ပရဟိတအလုပျတှကေို ထိပျဆုံးကနေ ပါဝငျကူညီတတျတဲ့သူပါ..။
ပရိသတျတှနေဲ့ အမွဲထိတှေ့ ပွောဆိုပွီး ပြျောရှငျစှာ ဘဝကို ဖွတျသနျးနတေဲ့ အေးမွတျသူက ဧပွီလ (၂၅)ရကျနမှေ့ာတော့ ဆယျစုနှဈတဈခုအကွာမှာ ပွောငျးလဲသှားတဲ့ အရာတှနေဲ့ မပွောငျးလဲဘဲ ရှိနတေဲ့ အရာလေးတှကေို “ကိုယျကအစှဲအလနျးကွီးသူပါခဈြသူ… ဘယျအရာတှကေမှ ကိုယျ့ကို မပွောငျးလဲစနေိုငျဘူး….။ ကိုယျ့အပွုံး….. ကိုယျ့အမူအယာ…ကိုယျ့ဟနျပနျ နဲ့ ကိုယျတနျဖိုးထားရတဲ့ အရာတှေ က ခုခြိနျထိ အရငျအတိုငျးပါ…. ။ အခြိနျတှေ ဘယျလိုပွောငျးပွောငျး…… ဘယျတော့မှ မပွောငျးလဲသှားတဲ့… ကြှနျမအပွုံး… ကြှနျမအသှငျသဏ်ဌနျ../ ကြှနျမဟနျပနျ../ ကြှနျမတနျဖိုးထားတဲ့အရာ…./ အခဈြအပျေါတနျဖိုးထားမှု့ ….. တှအေတှကျ ကြှနျမကို ကြှနျမကြးဇူးတငျနခေဲ့တယျ…။ မငျး သိပျခဈြတဲ့ ကောငျမလေး က ခုခြိနျထိ အခဈြ ကို တနျဖိုးထားတကျဆဲ အမြိုးသမီးတယောကျ အဖွဈ အရငျအတိုငျး ပွောငျးလဲ စှာ သူမ နရောမှာ သူမ တညျရှိနတေယျ ခဈြသူ.။
ဆယျစုနှဈ တဈခု ကြျောကြျောမှာ ကိုယျ့အခဈြက မပွောငျးလဲဘူး…. ။ ကိုယျ့ခဈြသူသာ …. ပွောငျးလဲသှားတာပါ.။” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။ အေးမွတျသူကတော့ သူမခဈြတဲ့သူသာ ပွောငျးလဲသှားပမေယျ့ သူမရဲ့ အပွုံးနဲ့ ဟနျပနျတှကေတော့ အရငျအတိုငျး ဆကျလကျပွီး တညျရှိကာ လှပနဆေဲပဲလို့ ပွောလာတာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးရော မပွောငျးလဲတဲ့ အလှတှနေဲ့ ပိုလှလှလာတဲ့ အေးမွတျသူလေးကို အားပေးရငျ မှတျခကျြလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ကွပါဦးနျော..။
“မကြာမှီလပိုင်းလေးမှာပဲ မျက်စိရှေ့တင် အသက် (၃)နှစ်ပြည့်တော့မယ့် သားအမွှာနှစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘဝအတွက် ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်လေးတွေပါပဲဆိုတဲ့ ဝေလျှံ”